Misy tranombakoka vaovao Apple manokatra ny varavarany ao Prague | Avy amin'ny mac aho
Ny tranombakoka Apple vaovao any Prague dia mampiseho ny fanangonana manokana ny vokatra Apple tsy miankina
Prague no tanàna nofidina hanokafana a tranom-bakoka paoma vaovao izany dia haseho amin'ny besinimaro ny fanangonana manokana tsy miankina amin'ny vokatra Apple Maneran-tany dia miresaka momba ny fitaovana misy Mac OS ary koa ny iOS sy ny fitaovana "kolo" hafa izahay tamin'ny 1976 ka hatramin'ny 2012.
Nanokatra ny varavarany ny Museum tamin'ny alakamisy lasa teo ary efa nahazo fitsidihana marobe, miaraka amin'ny sary maro nozarainas amin'ny Imgur sy ny zavatra hitanao raha tsindrio ity rohy ity.
Ny tranombakoka dia miorina amin'ny tranobe manan-tantara taloha nohavaozina, ny varavarankely ivelany an'ny Apple Museum dia voaravaka notsongain'i Steve Jobs ary manana ekipa miforona firaketana samihafa izay mandravaka ny varavarankely.
Ilay andian-teny nadika izay hitanao amin'ny sary etsy ambony ary aseho amin'ny iray amin'ireo varavarankely fidirana ho an'ny tranombakoka, na dia mendri-piderana aza, dia mbola marina ihany:
Paoma telo no nanova an'izao tontolo izao. Ilay voalohany naka fanahy an'i Eva, ilay faharoa Newton nahazo aingam-panahy, ary ny fahatelo nanolotra ny tenany ho an'izao tontolo izao tapa-kaikitry Steve Jobs.
Anisan'izany ny iray amin'ireo XNUMX Apple Lisa novokarina, Apple II ary Mac sy solosaina NeXT isan-karazany tena antitra koa. Hitanay ihany koa ny faritra natokana ho an'ny mpanonta printy apetrak'i Apple, raha any amin'ny faritra hafa amin'ny tranombakoka kosa dia ahitantsika ireo zoro natokana ho an'ny PowerMac sy iMac ao anatin'izany ny maodely laptop iBook, PowerBook ary MacBook.
Ireo kojakoja Apple izay kely fantatra amin'ny hoe fakan-tsary Apple dia hita ihany koa ao amin'ny tranombakoka manokana fizarana iray manontolo ho an'ny fianakaviana iPod iray manontolo, ao anatin'izany ny boaty Beatles fanontana manokana napetraka tamin'ny 2008 tamin'ny $ 795. Mazava ho azy ary ahoana no mety ho kely kokoa, isaky ny kinova amin'ny iPhone sy iPad, avy ireo modely tany am-boalohany tamin'ny 2007 sy 2010, dia aseho amin'ny latabatra hafa ihany koa, ao anaty toerana averina.
Araka ny Prague Post, misy mihoatra ny 12.000 XNUMX metatra ny fametahana solosaina napetraka tao amin'ny tranombakoka, zavatra tena mahavariana. Tsy tokony hadinontsika koa ny nodohan'ilay Apple genius, Steve Jobs, miaraka amin'ny bistro izay misy ny sakafo veganina rehetra ho fanomezam-boninahitra ny sakafo tian'i Steve Jobs.
Raha liana ny mitsidika azy ianao dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny Museum manodidina ny 11 Euros hanova.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny tranombakoka Apple vaovao any Prague dia mampiseho ny fanangonana manokana ny vokatra Apple tsy miankina
Antsipiriany amin'ny fanadihadiana manokana: Atao hovonoina (Feno), maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Mitandrema amin'ny iTunes Store sy ny fanjifana bateria ao amin'ny MacBook